Ixesha elizayo lwe-Oracle E-Business Suite kunye neNgcaciso eNgundoqo kwiNyaka ezayo
I-business suite ivuselela inzala yamashishini ngezizathu ezifanelekileyo. I-Oracle nguvulindlela we-software yokuphuhlisa, yokuthengisa kunye nokuthengisa, iinkqubo zelifu kunye ne-Enterprise Software Programs. Umbutho uqhubeka uhlambulula i-Oracle E-business Suite ukuze ulungele ukuza kusasa. Unyaka i-2015 yabonelela ukuguqulwa kwe-Oracle ibe ngumqhubi wesibini we-software omdala, emva kweMicrosoft. Ngaba unomdla omkhulu kunokwazi ukuba uza kujonga kwaye usebenze njani kwiminyaka embalwa? Nali ibali elipheleleyo, lichazwe ngokucacileyo:
Liliphi Ikamva le-Oracle E-Business Suite?
Iingxelo eziMkhulu kwiMinyaka ezayo
Indima yomlawuli we-E-business Suite kumashishini:
I-EBS okanye i-Oracle E-business Suite inikezela ngamashishini ukuba asebenze ipulazi enye yeseshishini kunye nedatha eyodwa. I-EBS iquka
Ulawulo lweCandelo loLawulo lweeNkonzo.
I-CRM - Ulwalamano lwaBathengi.
Ingqungquthela yenqununu ye-EBS yaqaliswa kwi-2007 kwaye ukususela ngoko ifike kude. Okwangoku, inguqu yakutshanje ye-Oracle i-12.2.6 kwaye ihlose ukuthumela inqaku elilandelayo kwi-2019 okanye i-2020 ngokuphucula okukhulu.
Ingqungquthela enkulu ye-EBS yaqaliswa kwi-2007 kwaye ukususela ngoko ifike kude. Okwangoku, inguqu yakutshanje ye-Oracle i-12.2.6 kwaye ifuna ukuthumela inguqu elandelayo kwi-2019 okanye i-2020 eneenkqubo eziphuculweyo.
1. Ukuphuculwa kwamanyathelo amabini:
Sifanele silungele ukubonelela ukuphuculwa kokubini kokuvala ikhupha i-12.2.7 kunye ne-12.2.8 ngu-2019.
2. Ifu ekhuselekile ngakumbi:
I-Oracle ilungiselela ukunika iinkonzo zefu ezikhuselekileyo kwiinkalo zamasango okanye karhulumente ezingabonakaliyo kwiinkonzo zefu. Idatha echaphazelekayo egcinwe yiyo mibutho evulekile ifanelekile ekusongeni ukuvuza kwaye i-Oracle ixhamla phantsi kwi-12.3 ukukhutshwa kwe-EBS engamkelwa kwi-100% isiteshi esiphephile sokudluliswa kwedatha.
3. Ikusasa liFu:
Umbutho ujolise ekusebenziseni i-SaaS (software-as-a-service) ukwenzela ukuba ishishini linakho ukuphatha ulwazi olunzulu nge-2030. U-Godwin wase-Oracle ucaphuna ama-enterprises, ahambisa kwi-EBS ngexesha elifanelekileyo, uya kubona iinkonzo ezintsha ze-SaaS zijojowe kumbutho.
Ukugcinwa kweencwadi, ukuphathwa kwezoshishino, ukunyuka kweendleko, ukugcinwa kwengxelo, ukugcinwa kwengxelo, ukugcina ingxelo, ezinye iimodyuli, ezinokusetyenziswa ngokukhawuleza kwi-EBS. Ukusebenzisa i-SaaS ye-Intelligent Intelligence ye-Oracle, ngokunjalo, ngokukhawuleza isichukumisa isiseko ukuqinisekisa imisebenzi engcono nefanelekileyo.
4. I-Analytical Predictive:
Iingcali zengcaciso zizinto ezithintekayo ezi ntsuku. I-Oracle iyinjineli yeenkonzo ze-SaaS kumandla okuPhathwa kwee-Predictive ukuphathwa kwee-asethi kumashishini. Iinkonzo ezintsha zifunwa ukuba zibanzi ngokubanzi kwaye ziza kuphucula ukufunda umatshini.
5. Uphuhliso lweefowuni:
Isofthiwe ehambelanayo yeselula yinkxalabo ye-Oracle kunye nabakhuphiswano bayo kusondele. I-EBS enye inqanaba elithile ukuba i-Oracle izama ukuzulazula kwi-Apps ye-Mobile kwaye ngoko ibe ngaphezulu kwifu kwi-bolster indawo.
Indlela yokwenza umsebenzi njengengcali ye-EBS?
Nge-Oracle ingxelo enkulu ye-EBS kuma-Enterprises, imfuneko yobuchule be-EBS nayo iyafuneka ukuba iphuhliswe ngokunyuka kunye nemida. Imfuno ye-Oracle iphakanyisiwe ukuqeqeshwa kobugcisa kuyo yonke intsha yokukhululwa. Kwimeko apho uzimisele ukuqala umsebenzi wakho wobugcisa njengengcali ye-Oracle EBS, kufuneka uhambe kwi-Oracle Certification.
Yintoni enokuthi isiqinisekiso se-Oracle EBS?
Amashishini amaninzi aya kuhamba kwi-Oracle E-shishini ye-Suite. Ngenxa yoko, ixabiso kunye nomxholo weklasi yesiqinisekiso sokukhawulela izakukhula, ukufumana amathuba amaninzi emisebenzi kunye neephakheji eziphezulu zokuhlawula ngonyaka we-2019 kunye ne-2020. Kuya kubakho oku:
Iingcamango ezisebenzayo zeengxelo ze-RDBMS kunye ne-SQL.
Izandla kwi-Oracle 9i okanye i-10g.
Njengomlawuli we-E-business Suite ufuna ukwenza ezi zilandelayo:
Hlela uze ukhawuleze iData efuna ukuphathwa kwishishini
Ukuphuhliswa kwemiSebenzi yokuPhenduka kunye neNkcazo eziMiselweyo ngokwemiqathango yemimandla
Idatha ngokubanzi ngokusebenzisa iMisebenzi yeQela ye-EBS yokunika ingxelo nokuvavanya
Ukuqwalasela i-Oracle Database Architecture ukuba isebenze ngokupheleleyo
Ukwenza i-Oracle Database
Ukulawula i-Oracle Database njengemfuneko yokuphatha ulwazi
Yiba nakho ukufumana ulwazi
Ukuqwalasela nokucwangcisa kwakhona izicwangciso zeSeckup
I-Oracle ihlala ibeka imali kwi-E-Business Suite yokuphucula ukuqinisa izinto ezintathu eziphawulekayo
Ukuhamba kunye ne-UI yangoku
I-Oracle iqhuba uphando olunzulu lweemarike kunye namashishini ajolisweyo kwaye isakha isikhokelo ngokusekelwe ngokupheleleyo kwiimfuno zabaxhasi. Ukuvumela umthengi ukuba ajabulele izibonelelo zeNkxaso-mali yeeNkcukacha kunye nezicelo kubathengi, kwaye bavumele ukuba bazuze iingenelo zokutshala imali kwi-EBS, iinjineli zabo zihlala zisebenza. Ukuphuculwa kwamva nje kungekudala kushintsho olukhulu kwi-EBS, nangona zijoliswe ukuba zibandakanye uphuhliso olusekelwe kwi-SaaS ukuya kwi-EBS.
Ungathanda kwakhona:Isikhokelo esigqibeleleyokwi-Oracle Certification
I-8 Izinto ezibalulekileyo omele Uzazi Ngeklasi ye-ITIL